Hlala kwiSitudiyo seSandpoint saseMzantsi
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguLisa
Yiza uhlale kwindawo entle yaseSouth Sandpoint! Le yidolophu ehambayo eneendlela ezininzi ezibukekayo kunye nokufikelela ngokulula naphi na edolophini. Kwimizuzu eyi-15 okanye ngaphantsi ungahamba ukuya eCity Beach, Down Town, Lakeview Park, Farmer's Market ... I-Boat Launch, iSikhumbuzo seSikhumbuzo apho uMthendeleko woMculo uqhutyelwa khona ukuhamba ngokukhawuleza kwisitrato.
Ukuba uziva uthanda ukuhlala kwaye uphumle ngaphandle, kukho indawo eninzi yokuphumla emva kwendlu.
Le ndawo yokuhlala yesitudiyo yabucala ingaphezulu kwegaraji yethu evaliweyo, ineseti epheleleyo yezitepsi, ezinokuthi zingalungeli abo bangakwaziyo ukunyuka izinyuko okanye abantwana abancinci. Ngasemva kwendlu yindawo ekwabelwana ngayo esinokuyisebenzisa ngokuhlwa. Nceda ujonge malunga nokusebenzisa umgodi womlilo njengoko kufuneka silandele izithintelo zasekhaya malunga nokuba ungasetyenziswa nini.
Ukuba uceba ukupheka, kukho i-skillet, i-Instant Pot, i-Microwave, i-Air fryer / i-Oven ye-Toaster, iBhodi yokuSika / iimela, izitya zokuxuba kunye nezixhobo ezisisiseko zesandla. Ungakugcina ukutya eFrijini/eFrijini.
4.98 ·Izimvo eziyi-158
4.98 · Izimvo eziyi-158
Sibekwe kwindawo ezolileyo kanye embindini wayo yonke into! Ukuhamba ngesitrato kuya kukusa ku-Evan's Brothers Coffee Roasters okanye uye kwelinye icala kuMnyhadala woMculo. Ezantsi idolophu yimizuzu ukuba uyonwabele ulwandle, iindawo zokutyela zasekhaya okanye iMarike yoMfama. Le ndawo iyindawo enqabileyo yeSandpoint.
I've lived in Sandpoint with my husband and 2 kids for nearly a decade and have grown to love it here. When I'm not working, I enjoy hiking, biking, swimming, hanging out with my f…
Ababuki zindwendwe bafumaneka ngeselfowuni okanye ngetekisi okanye ngokunkqonkqoza nje kumnyango ongasemva. Ubukhulu becala sikwiindawo zethu ezahlukeneyo. Sifikelela kwizithuthi zethu kwindawo yokupaka egaraji ekwabelwana ngayo imini yonke kwaye phakathi kweveki ikhefu lokuya emsebenzini phakathi kwe-6:30 kunye ne-7:30 am.
Ababuki zindwendwe bafumaneka ngeselfowuni okanye ngetekisi okanye ngokunkqonkqoza nje kumnyango ongasemva. Ubukhulu becala sikwiindawo zethu ezahlukeneyo. Sifikelela kwizithuthi z…